Orenji - iipropathi eziluncedo, unyango, iiresiphi
ezaposwa ngomhla 11.05.2021 11.05.2021
Ezi ziqhamo ze-citrus zinembali etyebileyo kunye nokusetyenziswa, unyango, kunye nokutya. Makhe sifunde ngakumbi malunga nenkosi yeziqhamo ze-citrus-orenji!
Ioyile efunekayo yeRosemary
ezaposwa ngomhla 10.05.2021 10.05.2021
Ukuba akukho mali yeemaski zeenwele ezibizayo, okanye awufumenanga iziphumo ezilindelekileyo. Yenza imaski ebalulekileyo yeoyile.
Uxinzelelo lwamaxesha athile
ezaposwa ngomhla 05.05.2021 05.05.2021
Kwihlabathi lanamhlanje, xa wonke umntu engxamile, basebenza kakhulu kwaye bachitha ixesha elincinci empilweni. Wonke umntu ukhe wanengxaki yokudakumba, kodwa inonyango njani, kwaye ingathintelwa njani?
Ihagu ene-prunes kwi-cooker ecothayo-iresiphi
Ukuba ufuna isidlo sangokuhlwa esingaqhelekanga, kodwa uthanda ukonga ixesha kwaye upheke umpheki ocothayo-inyama yehagu ene-prunes, emva koko uyifunayo! Elula, eyanelisayo, emnandi!
ezaposwa ngomhla 20.04.2021 20.04.2021
Ungaziphepha njani iimpazamo ezicacileyo xa ulungiselela umhla, yintoni ethathwa njengesiqhelo kwaye yintoni ekufuneka ithintelwe? Funda kwaye uhlale "ukhwele ihashe"
Imibuzo yobuhle edumileyo ubuneentloni ukubuza yona
ezaposwa ngomhla 17.04.2021 17.04.2021
Ininzi imibuzo malunga nempilo kunye nobuhle, kwaye ayisiyo yonke ebabuza ngokuthe ngqo. Makhe sixoxe ngezinye zazo!
Inye ayinakwahlulwa kubini- uthini ukuba uthandana nomhlobo
ezaposwa ngomhla 15.04.2021 15.04.2021
Ubomi ayisiyonto ilula phofu, kwaye nothando nalo, kodwa kuthekani ukuba wena nomhlobo wakho nibona umntu omnye? Uqhubeka njani? Yintoni ongayikhetha-ubuhlobo okanye ulwele umfana? Siza kuzama ukuwuqonda lo mbandela!
Ukugcinwa kwepasika kunye neetsheri - iresiphi emnandi yeholide
ezaposwa ngomhla 14.04.2021 14.04.2021
Nabani na ofuna ukubhiyozela i-Ista ngendlela emnandi neyahlukileyo, susa iresiphi-emnandi, engaqhelekanga- ayilibaleki!
Ukuthandana kweofisi - imigaqo yokhuseleko eyi-7
Uninzi lobomi bethu silichithe emsebenzini, kwaye ngekhe u-odole intliziyo yakho, hayi, hayi, kodwa kuya kuvela indoda enobukroti. Ukuthandana kweofisi kuyonwabisa, kodwa kukho imigaqo embalwa ekufuneka ilandelwe!
Yeka ukutya iilekese
Ngaba abaninzi sele befundile malunga neengozi zeswekile kunye neelekese? Kodwa singabagatya njani? Yeyiphi indlela efanelekileyo yokuyeka ukutya iilekese?
I-okroshka yamacala amaninzi
Sonke siqhele oko ukususela ebuntwaneni, okumnandi, okunempilo, okroshka evuselelayo. Masifumanise ngokufanayo- wayevela phi? Iluncedo njani? Iiresiphi zeokroshka yakudala kunye neyokuqala!
Iresiphi yengulube kebab ekhaya
ezaposwa ngomhla 06.04.2021 06.04.2021
Kule nqaku, ndiza kubelana ngeresiphi yokwenza i-barbecue ekhaya. Yeyiphi inyama ekufuneka uyithathile, ungahamba njani emanzini kwaye upheke. Ndiza kukuxelela nangesizathu sokuba ndikhethe izitena eziqhelekileyo endaweni ye-barbeque yesinyithi, kunye neenkuni zokubasa amalahle athengiweyo.
Ngexesha le-kebabs: i-pike lula kumalahle-iresiphi yokupheka
Ngokwale recipe, i-lula kunye ne-juicy lula kumalahle ayinakulungiswa kuphela kwi-pike. Ezinye iintlanzi zomlambo nazo zifanelekile: i-perch, i-roach enkulu, i-carp. Into ephambili yile fillet entsha, inkampani elungileyo kunye nomoya omkhulu!
Yintoni utshintsho oluncinci kwaye luyingozi njani?
ezaposwa ngomhla 03.04.2021 03.04.2021
Luyintoni utshintsho oluncinci, kutheni lunokwenzeka? Ungayiphepha njani? Fumana ulwimi oluqhelekileyo. Siza kukuxelela ngakumbi nangakumbi ...
Ikhadi lePasika elenziwe ngephepha elinombala
ezaposwa ngomhla 31.03.2021 31.03.2021
Ubugcisa bethu banamhlanje buya kuba ngePasika. Iya kuba yiposikhadi eyenziwe ngephepha elinombala kwaye iboniswe kule klasi yemasters
Shish kebab kwi-soy-mayonnaise marinade
ezaposwa ngomhla 27.03.2021 27.03.2021
Vumelana ukuba i-barbecue yenye yezona zidumileyo nezithandwayo zizitya ezininzi eziphekwe kwi-grill. Kukho iintlobo ngeentlobo zeeresiphi zokuzilungiselela, kwaye phakathi kolu luhlu ngamanye amaxesha kunzima ukufumana olona khetho lufanelekileyo oluza kulungela incasa yakho. Namhlanje sicebisa ukuba ndikuphekele inyama yehagu kebab egalelwe kwi-soy-mayonnaise marinade eneziqholo, enkosi apho ihlala inamanzi, ithambile kwaye, ndikholelwe, imnandi kakhulu.
Imibuzo ye-55 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,635.